Akụkọ - Gịnị bụ nzacha anya?
Kedu ihe nyocha anya?
Enwere ụdị ihe nzacha anya atọ: ihe nzacha ụzọ mkpirisi, ihe nzacha ogologo na ihe nzacha bandpass. Ihe nzacha ụzọ mkpirisi na-enye ohere ka ebili mmiri dị mkpụmkpụ karịa ka ebili mmiri a ga-ebipụ gafere, ebe ọ na-ebelata ogologo ebili mmiri dị ogologo. N'aka nke ọzọ, ihe nrịgo ogologo na-enyefe ogologo ebili mmiri karịa ogologo ebili mmiri ebe ọ na-egbochi ogologo ebili mmiri dị mkpirikpi. Ihe nzacha bandpass bụ ihe nzacha nke na -ahapụ otu oke, ma ọ bụ “band”, nke ogologo ebili mmiri ka ọ gafee, mana na -ebelata oke ebili mmiri niile n'akụkụ otu ahụ. Ihe nzacha monochromatic bụ ikpe dị oke nke nzacha bandpass, nke na -ebunye naanị oke ogologo nke ebili mmiri.
Ihe nzacha anya na -ahọrọ na -ebunye otu akụkụ nke ngwa anya anya, ebe ọ na -ajụ akụkụ ndị ọzọ. A na -ejikarị ya eme ihe na microscopy, spectroscopy, nyocha kemịkal, na ọhụụ igwe.
Ihe nzacha anya bụ ngwaọrụ na -agafe agafe nke na -enye ohere nnyefe nke ogologo ebili mmiri ma ọ bụ setịpụrụ ogologo nke ọkụ. Enwere klaasị abụọ nke ihe nzacha anya nwere usoro ọrụ dị iche iche: ihe nzacha na -amịkọrọ mmiri na ihe nzacha dichroic.
Ihe nzacha nsị nwere mkpuchi ihe dị iche iche na ihe ndị na -adịghị ahụkebe nke na -enweta ụfọdụ ebili mmiri nke ìhè, si otú a na -enye ohere ka ebili mmiri chọrọ. Ebe ọ bụ na ha na -amịkọrọ ọkụ ọkụ, okpomọkụ nke ihe nzacha a na -abawanye n'oge ọrụ. Ha bụ ihe nzacha dị mfe, enwere ike ịgbakwunye ha na plastik iji mee nzacha dị ọnụ ala karịa ndị ogbo iko ha. Ọrụ nke ihe nzacha a anaghị adabere na nkuku nke ihe merenụ kama na dabere na ihe mejupụtara ihe nzacha ahụ. N'ihi nke a, ha bụ ihe nzacha dị mma iji mgbe ọkụ na -egosipụta nke ebili mmiri a na -achọghị nwere ike ịkpata mkpọtụ na mgbama anya.
Ihe nzacha Dichroic dị mgbagwoju anya na ọrụ ha. Ha nwere usoro mkpuchi anya nwere oke ọkpụrụkpụ nke emebere iji gosipụta ebili mmiri na -achọghị ma nyefee oke ebili mmiri chọrọ. A na -enweta nke a site na ime ka ebili mmiri chọrọ ka ọ na -egbochi nke ọma n'akụkụ nnyefe nke nzacha ahụ, ebe ogologo ebili mmiri ndị ọzọ na -etinye aka n'ụzọ na -eche echiche n'akụkụ nzacha ahụ.